Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke Isii - Okwu Ugbu a
In Nkeji nke anọ, ụbọchị 1260 nke ọgụ n'etiti Dragọn ahụ na Nwanyị ahụ pụtara ịbụ ọkara nke mbụ nke Ọnwụnwa Afọ Asaa. O sitere na eziokwu na Dragọn ahụ na-achụ Nwanyị ahụ mana enweghi ike imeri ya: e nyere ya ebe mgbaba maka ụbọchị 1260 “n'ọzara” ahụ. Mgbe mmeri mmeri nke Kraịst batara na Jerusalem, echekwara ya pụọ ​​n'aka ndị chọrọ imerụ ya ma ọ bụ jide ya ihe dịka ụbọchị atọ na ọkara tupu Nri Anyasị Ikpeazụ. Ma oge ruru mgbe Nna kwere ka e nyefee Jizọs n'aka ndị ọchịchị. Otu aka ahụ kwa, a ga-enyefe ụfọdụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ịnata okpueze dị ebube nke okwukwe n’ihi ụbọchị iri abụọ na abụọ na iri abụọ - nke yiri oge ahụ site na Nri Anyasị Ikpeazụ ruo na Mbilite n’Ọnwụ.
M wee hụ anụ ọhịa ka o si n'oké osimiri ahụ pụta, nke nwere mpi iri na isi asaa… nye ya dragọn ahụ nyere ya ike ya na ocheeze ya na ikike dị ukwuu was Enyere anụ ọhịa ahụ ọnụ na-ekwu okwu nganga na nkwulu, ma e nye ya ikike ime ihe ruo ọnwa iri anọ na abụọ… E kwekwara ka ọ buso ndị nsọ agha ma merie ha, ma nye ya ikike ịchị ebo niile, ndị mmadụ, asụsụ niile, na mba niile. (Mkpu 13: 1-2, 5-7)
ENTmata anụ ọhịa
Na mbido ikpe nke afọ asaa, mpi iri a na isi asaa pụtara "na mbara igwe" na Dragọn ahụ "onye a na-akpọ Ekwensu na Setan" (12: 9). Ọ bụ ihe ịrịba ama na satanism na anwansi na-eru oke, mkpụrụ nke nkà ihe ọmụma ọjọọ nke Dragọn ahụ gbara ihe karịrị afọ 400 gara aga (lee Ingghọta Nsogbu Ikpeazụ). “Igwe” ahụ nwere ike ịbụ akara ngosipụta nke ike Setan rue oge ahụ bụ nke mmụọ kachasị karịa ọchịchị; nke esitere n’eluigwe dozie kari uwa (lee Ndi Efesos 6:12). Ma ugbu a, Dragọn ahụ, ebe ọ hụrụ na oge ya dị mkpirikpi (Mkpu 12:12), na-ewere ụdị, ma ọ bụ kama nke ahụ, na-enye ike ya, njikọta nke mba: “Isi asaa na mpi iri.” St John na-akọwa na mpi iri ahụ bụ "eze iri" (Mkpu 17: 2). Kadịnal dị asọpụrụ John Henry Newman, na-achịkọta echiche ndị Nna Chọọchị, na-egosipụta njikọta a:
“Anụ ọhịa ahụ,” ya bụ, alaeze ukwu Rom, -Advent Ozizi na-emegide Kraịst, Ozizi nke Atọ, Okpukpe nke ndị na-emegide Kraịst
Fọdụ ndị ọkà mmụta nke oge a kwenyere na European Union dị, ma ọ bụ na-etolite ka Alaeze Ukwu Rom ahụ ọzọ. Dragọn ahụ, ma ọ bụ Setan, bụ ihe mmụọ, mmụọ ozi dara ada, ọ bụghị njikọ nke mba dị iche iche n'onwe ya. Ọ na-ezobe n'okpuru uwe aghụghọ, zoo iwe ya na ịkpọasị ya na Chọọchị. Ya mere, na mbido, Iwu Ọhụrụ nke na-agbada n'okpuru Dragọn ahụ mmetụta ga-na mbụ na-egosi n'elu na-adị na-achọsi ike ma na-adọrọ mmasị gaa na mbara ala nke agha, ọrịa na-efe efe, ụnwụ nri, na nkewa na-ada ụda - ise nke akàrà nke Mkpughe. Ọ bụ afọ atọ na ọkara ka e mesịrị ka “e nyere anụ ọhịa ahụ ọnụ,” nke pụtara mmadụ n’ime mmadụ nke Ọdịnala na-akpọ Na-emegide Kraịst.
Kpọasị nke ụmụnne na-enye ohere n'akụkụ Onye ahụ na-emegide Kraịst; n’ihi ekwensu na-akwadebe ụzọ nkewa nile n’etiti ndị ahụ, ka onye ahụ nke na-abịa wee bụrụ onye ha ga-anabata. - Ọgụ. Cyril nke Jerusalem, Dọkịta Church, (Bɛyɛ afe 315-386) Ozizi Catechetical, Ihe nkuzi XV, n.9
Ọnwụnwa asaa nke afọ ma ọ bụ “izu” ahụ, dị ka Daniel na-ekwu, na-amalite na udo ụgha nke na-eme ka ụwa niile dị n’okpuru ọkọlọtọ nke Alaeze Ukwu Rom ahụ dị ndụ.
Ndien enye [emegide Kraịst] ga-eme ka ọgbụgba ndụ siri ike na ọtụtụ ndị otu izu. (Dan 9: 27)
Usoro ohuru ohuru a gha ebili n'uzo di nma nke bu otutu ndi Kristain ghota. Ikekwe Ìhè nke Akọ na Uche akụkụ ya ga-abụ ịdọ aka ná ntị na ụzọ ae chọrọ ka ọ bụrụ ụzọ zuru ụwa ọnụ na-emegide Chineke, ụzọ mbibi, “udo na obi iru ala ụgha.” Ya mere, na ìhè ahụ ghọrọ “oku ikpeazụ” iji dọghachi mkpụrụ obi n’ụzọ nke ezi ịdị n’otu Ndị Kraịst.
Ruo ọkara n'izu ahụ, Alaeze Ukwu Rom a dịghachi ndụ gbawara na mberede.
Anọ m na-eche banyere mpi iri o nwere, na mberede ọzọ, obere mpi, si n'etiti ha pụta, na atọ nke mpi ndị gara aga na-adọka iji nye ya ohere. (Dan 7: 8)
Mb peoplee ndi madu n sayingkwu, Udo na ntukwasi-obi di, mb disastere ahu na mberede ka ọdachi nābiakwasi ha, dika ime n laborme nwanyi nke di ime; (1 Thess.5: 3)
Kadịnal Newman, na-ekwughachi ndị Nna Chọọchị, na-akọwa ọdịda a nke Alaeze Ukwu ka mwepụ nke "onye mgbochi" nke 2 Thess 2: 7, na-eme ụzọ maka "nwoke mmebi iwu", "nwa mbibi", anụ ọhịa, àmà na-egosi (aha dị iche iche maka otu onye ahụ), iburu ike. Ọzọ, akpọrọ ya "ọnụ" nke anụ ọhịa ahụ, n'ihi na ya, Onye ahụ na-emegide Kraịst, ga-achị ma nye olu niile nke mmụọ onye na-emegide Kraịst na mba ndị ahụ.
Setan nwere ike iwere ngwa ọgụ aghụghọ dị egwu karịa — ọ nwere ike zoo onwe ya — o nwere ike ịnwa iduhie anyị n’obere ihe, ma otua ịkwaga Nzukọ-nsọ, ọbụghị otu mgbe, kama jiri nke nta nke nta site na ezigbo ọnọdụ ya. Ekwenyere m na o meela ọtụtụ ihe n'ụzọ dị otu a na narị afọ ole na ole gara aga is Ọ bụ amụma ya ime ka anyị kewaa ma kewaa anyị, iji nke nta nke nta chụpụ anyị n'okwute ike anyị. Ma ọ bụrụ na a ga-enwe mkpagbu, ikekwe ọ ga-abụ mgbe ahụ; mgbe ahụ, ikekwe, mgbe anyị niile bụ akụkụ nile nke Krisendọm wee kewaa, wee belata, wee jupụta n'ụdị nkewa, na ịjụ okwukwe. Mgbe anyị tụbara onwe anyị n’elu ụwa na dabere maka nchebe na ya, ma hapụ nnwere onwe anyị na ike anyị, mgbe ahụ ọ ga-awụkwasị anyị ọnụma nke iwe ruo ókè Chineke kwere ya. Mgbe ahụ na mberede, alaeze Rome nwere ike ịgbasa, ma onye ahụ na-emegide Kraịst pụtara dị ka onye mkpagbu, mba ndị na-atụ ụjọ na-agbakwa. - Ọ bụ John Henry Newman, Ozizi nke Atọ: Mkpagbu nke Na-emegide Kraịst
Ihu nke onye na-emegide Kraịst
Onye na-emegide Kraịst ga-egosi na ọ bụ onye nzọpụta nke na a ga-eduhie ndị Juu ikwere na he bụ mesaya.
N'ihi ya, na-eche na onye na-emegide Kraịst ga-eme ka à ga-asị na ọ bụ ya bụ Mezaịa ahụ, ọ bụ n'oge ochie ka ndị mmadụ nụrụ na ọ ga-esite n'agbụrụ ndị Juu ma debe iwu ndị Juu. - Kadịnal John Henry Newman, Okwu ndi ozo banyere onye na-emegide Kraist, Ozizi nke Abụọ, n. Ogbe 2
Mpi a nwere anya dị ka nke mmadụ, na ọnụ nke ji mpako kwuo okwu… Ọ ga-abịa n'oge udo na were ọchịchị aghụghọ were alaeze ahụ. (Dan 11:21)
Mgbe nke a gasịrị Judas biliri ọtọ, ụfọdụ ndị Nna Chọọchị na-atụ aro na n'ikpeazụ ọ ga-ebi n'ụlọ nsọ (nke Jerusalem?).
Na mbu, ọ g willyikwasi idi-nwayọ (dika agāsi na ọ bu onye mara ihe na onye nwere uche), nwe-kwa-ra anya-udo, n beneme-kwa-ra amara; na-atụ anya Kraịst, ọ ga-emesịa gosipụta ụdị mpụ niile dị iche iche nke enweghị obi mmadụ na mmebi iwu, iji bulie ndị ajọ omume niile na ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke bụ ndị bu ya ụzọ; Igosipụta megide mmadụ niile, ma karịsịa megide anyị Ndị Kraịst, mmụọ nke na-egbu ọchụ ma nwee obi ọjọọ, enweghị obi ebere na aghụghọ. - Ọgụ. Cyril nke Jerusalem, Dọkịta Dọkịta (ihe dịka 315-386), Ozizi Catechetical, Ihe nkuzi XV, n.12
Site na ịrị elu nke onye na-emegide Kraịst, ofbọchị Ikpe Ziri Ezi eruwo, ebe nwa nke ịla n'iyi ghọrọ, akụkụ nke ngwá ọrụ nke ịdị ọcha Chineke. Dịka otu ụbọchị si amalite n'ọchịchịrị, otu a kwa ka "ofbọchị nke Onyenweanyị," nke na-emecha ghọọ Ìhè.
'O zuru ike n'ụbọchị nke asaa.' Nke a pụtara: mgbe Ọkpara Ya ga-abịa bibie oge nke onye ahụ na-emebi iwu ma kpee ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke ikpe, ma gbanwee anyanwụ na ọnwa na kpakpando-mgbe ahụ Ọ ga-ezu ike n'ezie n'ụbọchị nke asaa… -Akwụkwọ ozi Banabas, nke Nna nke Apostolic nke narị afọ nke abụọ dere
Mana tutu thebọchị nke Onye-nwe, Chineke ga-ada ụda opi nke ịdọ aka ná ntị… Opi Asaa nke Mkpughe. Nke ahụ na Nkebi nke VII…
Ihe na ỤLỌ, Afọ asaa na ọnwụnwa.
← Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke V
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke VII →